Faahfaahin kooban: Heshiiska batroolka ee ay dowlada iyo shirkaduhu wada galeen
Laba shirkadood oo lagu kala magcaabo Kuwait Energy Company and Indonesia's PT Medco Energi Internasional Tbk. Kuwaas oo maalgeliya dhulal kala duwan ayaa hadda waxaa ay go'aansadeen iney baaritaan shidaal ah ka sameeyaan dhulka soomaaliya. Dowlada FKMG ee soomaliya ayaa iyana arinkan ku qanacsan. Masuuliyiinta dowladuna waxaa ay heshiis hordhac ah oo waxlaga bedeli karo la galeen labada shirkadood ee aan kor kusoo sheegnay. Heshiiskaas oo loogu magac daray “sharciga batroolka soomaaliyeed” ayaa dhowaan la doonayaa in la hor geeyo baarlamaanka soomaaliya. Walow ay masuuliyiinta dowlada soomaaliya aad moodo iney weli ka taxadarayaan iney faafiyaan heshiiskan ayaa haddana waxaa aad wax uga qoray arinkan warbaahinta aduunka.
Sida heshiiska hordhaca ah ku cad labdaaan shirkadood waxaa ay doonayaan iney qaataan lahaanshaha ama saamiga 49% shirkad batrool oo dowlada soomaaliya ku talo jirto iney sameyso. Sida ka muuqata heshiiskan, wakiilo iyo madax ka tirsan labada shirkadood ayaa la taliyayaal dowlada uga noqon doona dhinaca arimaha soosaarida shidaalka. Saraakiishaas waxaa ka mid ah Maamulayaasha labada shirkadood.
Weli ma cada sida ay labadaan shirkadood u qaybsan lahaayeen qabtooda ay ku yeelan doonaan shirkada batroolka ee ay dowladu samayso. Waxaa kaloo aan heshiiska ku caddeyn caddadka maalgelinta ay sameynayaan inta uu le`egyahay.
Shirkada kuwayt waa shirkad yar oo madax banaan, Mustaqbalkana dooneysa iney kordhiso wax soosaarkeeda xagga saliida ah. Sanadka 2010 waxaa ay shirkadu ku hanweyn tahay iney soo saarto ilaa 50000 oo fuusto maalintiiba halka uu sanadkii hore waxsoosaarkeedu ahaa ilaa 1971 fuusto maalintiiba. Shirkadu waxaa ay howlo ka wadaa wadamada kala ah: kuweyt, masar, cumaan, yemen, ruushka iyo kamboodiya.
Qaabka loo qaybsanaayo faaìidada soo baxda.
Kolkaad si qotodheer u eegtid nuqulka heshiiska dowlada iyo shirkadaha baaraya shidaalka waxaa aad arkeysaa qaabka loo qaybsanaayo faaìidada taas oo lagu muujiyey qaab xisaabeed.
Qaab xisaabeedkaas waxaa aad ka heli kartaa page-ka 52-aad iyo kan 53-aad.
Sida ku cad qaabkaas xisaabta waxaa kolka hore la xisaabinayaa wax kasta oo kharash ah ee ku baxay soosaarida shidaalka. Kaas oo laga jaraayo dhaqaaligii la soo saaray.
Kolkii la kala jaro dhakhliga iyo kharashka ayaa hadii faaìido soo baxdo lakala qabsan doonaa.
Eeg bogga 53-aad.
Shirkadaha ay dowladu leedahay waxaa ay helayaan 1,2 bilyan oo dollar ama 69%, waa hadii la iibiyo saliid gaareysa ilaa 50 milyan oo fuusto (eeg sadarka ugu hooseeya kan ka koreeya ee xisaabaadka ku qoran p. 53). Halkii fuusto waxaa ay ku qiyaaseen in lagu iibiyo ilaa ilaa 50 dollar.
Sidoo Kale isla meeshaas aan tilmaanay ( p. 52), sadarka hoose ee ciwaankiisu yahay "contractor" waxaad ka arki kartaa qaybta ay boqolkiiba helayaan shirkadahaas heshiiska galay. Taas oo iyana ku xiran hadba inta fuusto batrool ah ee la iibiyo. Waana qayb kordheysa markasta oo waxsoosaarku kordho. La soco waxa aan ka hadleyno ee ku cad qoraalka p.52 waa qaybsiga faaìidada (profit) Baalka 51- aad waxaad ku arkeysaa dakhliga guud iyo qaybta kasoo gaareysa dowlada iyo shirkadaha.( eeg ciwaanka: gross revenue)
Baalka( page-ka) 52-aad waxaa ku sharaxan tusaale ahaan haddii la iibiyo 350 milyan oo fuusto ay dowladu qayb ahaan qaadan doonto 7.955 bilyan ama 63.6% acagta lagu iibiyo saliidaas, halka dawlada+shirkada shidaalka iyo iyo hay'adaha dawladdu leedahay ee qabdaraaska qaata ay isku dar ahaan qaadan doonaan 9.1 bilyan ama 72.8% lacagta lagu iibiyo saliidaas.